> Resource> Igwefoto> Casio Igwefoto Photo Recovery Guide
Olee Otú M Pụrụ Naghachi Photos si Casio igwefoto?
Hi, m na-ezighị ehichapụ ụfọdụ foto site na m Pentax K20D. Achọrọ m nnọọ ịma ma ọ bụrụ na m nwere ike naghachi ha si m Pentax K20D ma ọ bụ site na ya SD kaadị. M n'ezie mkpa iji nweta foto m azụ na m nwere olileanya na mmadụ nwere ike inyere aka iduzi m na ziri ezi. Ekele.
I nwere ike mgbagwoju anya na foto gị nwere ike na-efu-adịgide adịgide. Otú ọ dị, gị nwere ike omume weghachite foto site na Casio igwefoto bụrụhaala na ha adịghị e overwritten site ọhụrụ data na gị igwefoto si kaadị ebe nchekwa. Ya mere, ị dị nnọọ mkpa ịkwụsị iji gị Casio igwefoto na anya n'ihi na a ngwá ọrụ iji nyere gị aka ozugbo.
E nwere ọtụtụ nke Casio igwefoto foto mgbake omume na internet nke pụrụ idozi nsogbu gị. Wondershare Photo Recovery Ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac bụ ezi nhọrọ maka gị iji weghachi foto ndị si Casio igwefoto, n'agbanyeghị na ha na-efu n'ihi nhichapụ, kaadị formatting, ma ọ bụ ọbụna usoro njehie. Ọzọkwa, a usoro bụ ike naghachi vidiyo na ọdịyo faịlụ site na Casio igwefoto kwa.
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute nke Wondershare Photo Recovery naghachi foto site na Casio igwefoto ugbu a. Ị nwere ike iṅomi gị Casio igwefoto si kaadị ebe nchekwa na ịhụchalụ hụrụ photos ka ego otú ọtụtụ gị furu efu foto ike-natara.
Igosi Casio Igwefoto Photo Recovery na 3 Nzọụkwụ
Ndị na-esonụ ndu na-eme na Windows version nke Wondershare Photo Recovery, na Mac version nwere yiri ime kwa.
Cheta na: Ị mkpa jikọọ gị Casio igwefoto ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa na kọmputa gị iji hazie ihe ndị mgbake.
Nzọụkwụ 1 Wụnye na ẹkedori Wondershare Photo Recovery
Mgbe wụnye na-agba ọsọ Wondershare Photo Recovery na kọmputa gị, ị ga-mkpa pịa "Malite" na-amalite Casio igwefoto foto mgbake.
Nzọụkwụ 2 iṅomi Your Casio Igwefoto
Ebe a ị dị nnọọ mkpa iji họrọ mbanye gị Casio igwefoto ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa na pịa "iṅomi" button ịchọ ọdịnaya na ya.
Nzọụkwụ 3 weghachite Photos si CasioCamera
Mgbe scanning, hụrụ faịlụ gị Casio igwefoto ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa ga-edepụtara ke "Audio", "Photo" na "Video" edemede.
Ịnwere ike ihuchalu foto niile elele ma Wondershare Photo Recovery omume n'ezie na-enyere ma ọ bụ.
Mgbe ahụ, ị ​​na mkpa iji akara photos ị na-aga naputa site na gị Casio igwefoto na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Cheta na: Iji zere data overwritten, biko adịghị na-Natara foto azụ gị Casio igwefoto ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa.